မြွေဂိမ်း Em Emulator.online မှ ၀ င ်၍ ခံစားပါ
မြွေဂိမ်း - တစ်ဆင့်ချင်းကစားနည်း 🙂
ကစားရန် backgammon အွန်လိုင်းအခမဲ့ရိုးရိုးလေး ဤအအဆင့် -by-step ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ:
အဆင့် 1 ။ သင်နှစ်သက်သောဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ဂိမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ Emulator.online
အဆင့်2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသပြီးပြီဖြစ်သည်။ သင်ရုံကိုနှိပ်ပါ ကစား သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖွဲ့စည်းမှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျဂန္ mode ကိုနှင့်အတားအဆီး mode ကို (စွန့်စားမှု) အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည် . 🙂
အဆင့် ၃ အချို့သောအသုံးဝင်သောခလုတ်များဖြစ်ကြသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် " အသံထည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ "ကိုနှိပ်ပါ" ကစား "ခလုပ်နှိပ်ပြီးကစားပါ။ ခေတ္တရပ်ဆိုင်း "နှင့်" ပြန်စတင်သည် "အချိန်မရွေး။
4 အဆင့်။ ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်အတွက်သင်ပူဖောင်းများကိုပစ်ခြင်းဖြင့်ရောင်စုံဘောလုံးအစဉ်လိုက်ကိုဖျက်ဆီးရမည်။ သငျသညျတူညီသောအရောင်သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတူတူသောအခါ, သူတို့ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။
အဆိုပါ မြွေဂိမ်း မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ဗွီဒီယိုခလုတ်များနှင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြွေရဲ့ခေါင်းကိုမျက်နှာပြင်ကနေလမ်းပြဖို့ဖြစ်တယ် , လမ်းတစ်လျှောက်ကျပန်းဖြန့်ဝေသောပန်းသီးကိုစားရန်ကြိုးစားနေသည်။ မဆုံးရှုံးစေရန်သင်နံရံများနှင့်မြွေ၏အမြီးကိုမရိုက်ပါနှင့်။
မြွေကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည် . မူရင်းဂိမ်းတွင်သင်သည်အခြားပြိုင်ဘက်များနှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏ရန်သူများသည်သင်သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်တိုက်မိရန်ဖြစ်သည် သငျသညျနေဆဲရပ်နေခဲ့ကြသည်နေစဉ်။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီ၌ ၉၀ ဒီဂရီသာရွေ့လျားနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်သင့်တွင်ဂန္ထဝင် directional ခလုတ်များရှိသည်။
မြွေဂိမ်း၏အကျော်ကြားဆုံးမူကွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူတိုက်မိနိုင်ပါတယ် ကျနော်တို့သတိထားမဟုတ်လျှင်။
Blockade နှင့်မြွေ၏ဗားရှင်းအများအပြားရှိခဲ့သည်။ Atari 2600 အတွက်မူကွဲနှစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဒိုမီနို နှင့် ဝန်းဝိုင်း ။ ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဗားရှင်းကိုခေါ် ပိုးကောင် များအတွက်ပရိုဂရမ်ခဲ့သည် Commodore နှင့် Apple II ကွန်ပျူတာများ .
နှင့် 1982 ခုနှစ်တွင်အမည်ရဂိမ်းတစ်ခု Nibbler ဖြန့်ချိခဲ့သည် , မြွေသရုပ်ဆောင် အဆိုပါ Pac-Man labyrinth (1980) ၏ဆင်တူတဲ့ setting ကို၌တည်၏။
မူကွဲတစ်ခု Nibbles (၁၉၉၁) ကို QBasic နမူနာအစီအစဉ်အဖြစ် MS-DOS နှင့်တင်ပို့ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာဗားရှင်းလို့ခေါ်တယ် Rattler ပြိုင်ပွဲ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Microsoft Entertainment Pack, ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်း၊ အချို့ကိုအချို့သော ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းများဖြစ်သော Minesweeper သို့မဟုတ် FreeCell ကဲ့သို့ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဒီကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး Blockade / Snake / Nibbler အတွက် Nokia သည်လောင်းသည် ပျက်ကွက် ဂိမ်း သူတို့ရဲ့ Nokia ဖုန်းများအတွက်။ ဒိုင်းနမစ်များသည်လွယ်ကူပြီးစွဲလမ်းစေသည်၊ ပျော်စရာကောင်းသည်၊ ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
မြွေဂိမ်းတစ်ခုဂန္ဖြစ်ပါတယ် ထိုအချိန်၏မိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မအံ့သြသင့်ပါ ဒီဂိမ်းမျိုးစုံမျိုးကွဲ ။ ၎င်းကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေရသည့်အကြောင်းရင်းမှာကစားသောအခါ၎င်း၏စွဲလမ်းနိုင်စွမ်းနှင့်ရိုးရှင်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်ဆက်လက်ထည့်သွင်းရန်အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိတော့ပါ။
ဒါတွေအားလုံးနဲ့အတူ ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဖန်တီးခဲ့သောဂိမ်းသည်မေ့လျော့။ မရသောကစားနည်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြွေဂိမ်းအနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြပါမည်။
Nokia မြွေ 1
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် မူရင်းမြွေ Nokia S60 အတွက်အပန်းဖြေ ဒီဟာကငါတို့မိုဘိုင်းမှာမြွေဂိမ်းကိုကစားနေတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားပဲ။
မြွေမူလမူလမြွေ ။ ၎င်းသည် iPhone ဖုန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒီဗားရှင်းမှာတော့သူတို့ကပေးချင်တယ် စပျစ်သီးကိုကြည့် ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းမှာ
နင် ။ accelerometer ကိုသုံးပါ။
မိုဘိုင်းမြွေ။ iPhone နှင့် iPod touch များအတွက်ဂန္ထဝင်မြွေ။
GeoSnake ဒီဗားရှင်းမှာပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့ function အသစ်တစ်ခုရှိတယ် ကွဲပြားခြားနားသောပထဝီမြေပုံ။
ထို့အပြင်ဂရပ်ဖစ်နှင့် 90s များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်အကျော်ကြားဆုံး console များသည်ပင်ခုခံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ သူတို့ရဲ့မြွေဂိမ်းသူတို့ရဲ့ဗားရှင်းဖြန့်ချိ ။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်၎င်းတို့၏ဗားရှင်းအသစ်တွင်အသစ်သောအရာများပါ ၀ င်သော်လည်း Snake Game ၏အနှစ်သာရကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် PSP၊ Play Station 3, WII, Nintendo DS နှင့် Xbox 360 တို့ပါဝင်သည်။
မြွေအလွန်ထားရှိမည် လွယ်ကူသော နှစ်ခုလုံး အမြင်အာရုံ နှင့်ဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ အဓိကအာရုံစိုက်သည့်အရာမှာကစားသမားများကစားနိုင်သည့်မြွေတစ်ကောင်ဖြစ်သည် လမ်းညွှန်လေးခု - ဘယ်၊ ညာ၊ အထက်၊ .
pixel များ (ပန်းသီး) ကျပန်းပေါ်လာပါသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ နှင့် ဦး ခေါင်းနှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိရမည်ဖြစ်သည် မြွေ၏။ pixel တစ်ခုစီကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကစားသမား၏ရမှတ်တိုးလာရုံသာမကတစ်ယူနစ်၏စုစုပေါင်းအရှည်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ထို့ကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေရာများသည် ပို၍ သေးငယ်လာသည်နှင့်အမျှအခက်အခဲများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးပွားစေသည်။ မြွေသည်ကစားကွင်းအစွန်း (သို့) သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အထိကိုထိမိသောအခါဂိမ်းသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။
Arcade Classic များနည်းတူ Snake သည်အင်တာနက် flash game တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါမူကွဲပေါ်မူတည်။ အပိုဆောင်းအတားအဆီးထားရှိမည် အခက်အခဲများ၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကစားသမားများ၏လမ်းကြောင်း၌တည်၏။
စုစုပေါင်းရမှတ်များပိုမိုများပြားစေရန် အပိုဆုကြေး အချို့ဗားရှင်းများတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
အကြောင်းရယ်စရာအရာ ဂိမ်း ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါတယ် ရိုးရှင်း နှင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို crashing ရှောင်ရှားရန်မဆိုလှည့်ကွက်ပြောပြရန်လိုအပ်သည်ဟုမထင်ထားဘူး။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမဲ့လည်ရန်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အတူတူပဲအမြဲတမ်းဖြစ်တတ်တယ်၊ အတွင်းထဲ၌ကျော့ကွင်းကိုထောင်ထားကြပြီ မြွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အဲဒီမှာထဲကရတဲ့၏မဆိုလမ်းမရှိဘဲ။
ကောင်းပြီ၊ အဆုံးမဲ့ဘဝ၏လှည့်ကွက်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မြွေတစ်ကောင်အားအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်မည်သို့ပျောက်ကွယ်သွားမည်ကိုမမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ဤရွေ့ကားအချို့ စိတ်ကိုထားရန်ရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များ ငါတို့မြွေကြီးကြီးထွားချင်တယ်ဆိုရင်၊
ပထမတော့ရွှေ့ဖို့အရမ်းလွယ်တယ် အတူမျက်နှာပြင်ပတ်ပတ်လည် အဓိပ်ပါယျမရှိသော အဆီများ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာနေရာအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မြွေရဲ့အရွယ်အစားကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုရှိတယ်။
ဤနေရာတွင်သင်အမြဲတမ်းစတင်ရန်အကြံပြုပါသည် အထဲကမြွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပါ ဤနည်းဖြင့်သင်ခေါင်းကိုခန္ဓာကိုယ်အကြားပိတ်မိနေခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ဒါဟာမြွေရဲ့အဓိကတာဝန်ပဲ။ သူကြီးထွားဖို့ပန်းသီးကိုစားရမယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာနောက်ထပ်အဖြစ်များသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့ကိုသင်တိုက်ရိုက်မသွားသင့်ပါ စိတ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကွံဉာဏျကိုဆောင်သောမရှိဘဲ။ အမြဲတမ်းမြွေ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာအမြီး၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်တိုက်မိလိမ့်မယ်။
လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ပန်းသီးစကတ် သင်၏မြွေတစ်ခုလုံးကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်အထိသေချာသည်။
ဒီဂိမ်းကိုသိလား သင်၌ဤဂိမ်း၏ဇာတ်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုကစားရန်နည်းလမ်းများရှိသဖြင့်မည်သို့မည်ပုံသင်မြင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် ထကြွဘွယ်ဖြစ်သော ဒါဟာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာဒီဂိမ်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ ဒါကြောင့်စပြီးကစားရန်နှင့်ဖန်သားပြင်တွင်ကပ်ထားသောနာရီများကိုအချိန်ဖြုန်းရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။